Ithimba lokuhlela le-Economia Finanzas | Ezezimali Zomnotho
Ezezimali Zomnotho yiwebhusayithi ezalwe ngo-2006 inenhloso ecacile: ukushicilela imininingwane eyiqiniso, enenkontileka nekhwalithi ngomhlaba wezezomnotho nezezezimali. Ukufeza le nhloso kubalulekile ukuba neqembu labahleli abangochwepheshe kulo mkhakha futhi abangenankinga yokukhuluma iqiniso njengoba linjalo; azikho izintshisekelo ezimnyama noma into enjalo.
Ku-Economia Finanzas ungathola imininingwane ehlukahlukene kakhulu esukela emiqondweni eyisisekelo efana ne yini i-VAN ne-IRR kwezinye eziyinkimbinkimbi njenge amathiphu ethu wokwehlukanisa imali oyitshalile ngempumelelo. Zonke lezi zihloko nezinye eziningi zinendawo kuwebhusayithi yethu, ngakho-ke uma ufuna ukuthola konke esikhuluma ngakho, into enhle kakhulu ukuthi faka lesi sigaba lapho uzobona khona uhlu oluphelele lwe zonke izihloko ezihlanganisiwe.
Ithimba lethu lishicilele amakhulu ezindatshana ezikhuluma ngezomnotho, kepha kusenezinye izihloko eziningi ezizofakwa. Yebo Ngabe ufuna ukujoyina iwebhusayithi yethu futhi ube yingxenye yethimba lethu lababhali okufanele ukwenze nje gcwalisa leli fomu futhi sizoxhumana nawe ngokushesha okukhulu.
Ezomnotho yinto esiyithandayo kusuka ngomzuzu wokuqala esibhekana nawo wokuziphilisa. Kodwa-ke, lolu lwazi oluningi asilufundi, ngakho-ke ngithanda ukusiza abanye baqonde imiqondo yezomnotho nokunikeza amathiphu noma imibono yokwenza ngcono ukonga noma ukukufeza.
Bengilokhu ngitshala izimakethe iminyaka, empeleni ngesizathu esisodwa noma esinye umhlaba wokutshalwa kwemali ungithakasele kusukela ngisafunda esikoleni esiphakeme. Zonke lezi zici ngizihlalele njalo ngaphansi kwesipiliyoni, ukutadisha, kanye nokuvuselelwa okuqhubekayo emicimbini. Ayikho into engizifela ngayo njengokukhuluma ngomnotho.
Ngiyayithanda imininingwane, futhi ikakhulukazi ngomnotho futhi ngidlulisela imininingwane yami kubantu ukuze bakwazi ukuphatha imali yabo kangcono. Vele, ngokunemba nokuzimela, kuzolahleka okuningi.
Ngiyazithanda ezomnotho nezezezimali, yingakho ngiqale lo msebenzi engithemba ukuqhubeka nokufunda kuwo, futhi ngabelane ngolwazi lwami, ngisesikhathini nakho konke okwenzekayo kulo mhlaba.
Ngiyazifela ngokutadisha ezomnotho nezezezimali, kangangoba izifundo zami zigcine zihlobene nale mikhakha. Isifiso sami ukufaka isandla ekwabiweni ngokulingana kwezinsizakusebenza, okufanele kube yinto ye-Economics njengeSocial Science.
Igama lami nginguJulio Moral futhi ngineziqu zezomnotho ezivela eComplutense University of Madrid. Uthando lwami olukhulu kwezomnotho / ezezimali futhi, nomhlaba othokozisayo wokutshalwa kwezimali. Sekuyiminyaka ethile manje ngibe nenhlanhla enkulu yokuthi ngikwazi ukuziphilisa ngokuhweba nge-Intanethi.